Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Ọbịa ọbịa » Ogologo oge ole ka ịkwụ ụgwọ ụgwọ na-emetụta Ebe E Si Nweta Gị?
Usoro akara niile dị na United States dabere na akụkọ kredit gị, nke akọwapụtara na mkpesa gọọmentị sitere na Experian, Equifax, na TransUnion.
Ịkwụ ụgwọ ma ọ bụ mbubreyo bụ ihe kacha emebi ihe.
Ha na -akọwa ihe karịrị otu ụzọ n'ụzọ atọ nke ngụkọta oge (35% maka FICO na 40% maka VantageScore).
Mmetụta ya na -adabere n'otú ị ga -esi mehie mmejọ gị n'oge adịghị anya. Nke a bụ isi ihe.
Ịkwụ ụgwọ n'oge na -aghọ onye ikpe na -ezighị ezi n'ime ụbọchị 30. Nke a bụ mgbe ekwesịrị ịkọwa ya n'ihu ọha. Ihe ndị dị otú ahụ na -anọ na ndekọ maka afọ 7, ruo mgbe ha ga -apụ n'anya. Bureaus anaghị ewepu ozi ekwenye ekwenye, ọ nweghịkwa ihe mgbochi. Ọ bụrụ na mkparị bụ mmejọ nke gị, chee egwu ahụ: ọ nweghị ihe ị ga - eme iji hichapụ ya. Ọ bụrụ na nsogbu ego gị na -ebute ọdịda nke Isi nke 7, ọ ga -emebi ndekọ na akara ahụ ruo afọ iri.
Mgbe enwere ike ihichapụ ya
Ịkwụ ụgwọ n'oge anaghị akwụsị ruo mgbe ngwụcha. Ọ baghị uru oge ị gafechara - ụbọchị 30 ma ọ bụ ụbọchị 60. N'ọnọdụ ọ bụla, ozi ahụ ga -aga n'ihu na -emetụta ọnọdụ gị ruo afọ 7. Agbanyeghị, ndị na -azụ ahịa nwere ike wepụ ụgwọ ịkwụ ụgwọ n'oge akụkọ kredit ọ bụrụ na ha bụ ụgha. Mkpesa mkpesa juru ebe niile, ọ bụ ya mere ụlọ nrụzi ji na -eme nke ọma. Ụlọ ọrụ ọ bụla nke mba nwere ike imehie ụdị ihe ahụ.
Companylọ ọrụ dịka Iwu Lexington nwere ike ịchọpụta mmejọ, nakọta ihe akaebe iji gosi ha, wee mepee esemokwu nkịtị. Firmlọ ọrụ ndozi na -eme ihe niile n'aha gị, ka ị na -enyocha ọganihu site na ọnụ ụzọ ma ọ bụ ngwa. N'otu oge ahụ, ị ​​nwere ikike ibido esemokwu ndị ahụ n'onwe gị n'efu.
Nke a bụ usoro chọrọ ma na-ewekwa oge, nke chọkwara ịma iwu kredit ndị ahịa. Ọ bụghị ihe ijuanya, ọtụtụ nde ndị America na -ahọrọ ka emeziere akara ha. Dị ka ụlọ ọrụ Federal Trade Commission si kwuo, 20% nke ndi ahia zute akara na -ezighi ezi.
Mmetụta na akara ahụ
Ịla azụ na ịkwụ ụgwọ otu oge dị mkpa karịa ka ị nwere ike ịtụ anya ya. Ọ dabara nke ọma, mmetụta ahụ na -ebelata ka oge na -aga, ọkachasị ma ọ bụrụ na enwere naanị otu mmejọ na ndekọ gị. Ọ bụrụ na igbu oge emee, gbochie mmebi ahụ site na ịkwụ ụgwọ niile sochiri ya n'oge. Nke a dị oke mkpa.
Rịba ama na anaghị akọ ụgwọ ịgba ụgwọ n'oge ruo mgbe ụbọchị iri atọ gafere. Nke a na -enye windo iji dozie ya. Ọ bụrụ na ịkwụ ụgwọ ngwa ngwa, agaghị etinye ya n'oge ego gị gara aga. Mgbe ụbọchị 30 mbụ gachara, a na -ekwe nkwa njehie ahụ ka ọ ga -emetụta ndekọ na akara. Nsonaazụ ya nwere ike ịdị oke njọ dị ka mfu nke isi 30! Nke a bụ ihe mgbagwoju anya ndị ọzọ.
● Oge na -erughị ụbọchị 30
Nke a bụ usoro kachasị mma. A naghị akọ ụdị igbu oge a. Ọ bụ ezie na ị ka ga -akwụ ụgwọ ntaramahụhụ, a na -ebelata mbibi.
● Nkwụsị nke ụbọchị 30-59
Mgbe ụbọchị iri atọ mbụ gachara, mkparị ga -apụta na ndekọ gị. N'otu oge ahụ, ị ​​ka ga -akwụrịrị ụgwọ. Mee ya ozugbo enwere ike.
● Nkwụsị nke ụbọchị 60+
Ọ bụrụ na ị funahụrụ ụbọchị abụọ n'usoro, mkpesa gị ga -agụnye ọkwa pụrụ iche. Nke a na -aka njọ mmebi nke ọnọdụ gị, yabụ ọ na -agbada karịa. Ka ị na -akwụkwu ụgwọ ịkwụ ụgwọ - ka a na -etinyekwu ọkwa, yana ntaramahụhụ ka njọ. N'ikpeazụ, a ga -enyefe ndị na -anakọta ụgwọ ahụ, ebe onye na -agbazinye ego mbụ ga -emechi akaụntụ ahụ.
Dịka ị pụrụ ịhụ, ịkwụ ụgwọ efu bụ mmejọ kacha njọ ị nwere ike ime. Ụfọdụ ndị na -enye kaadị anaghị enye gị ntaramahụhụ maka ịkwụ ụgwọ oge (etinyeghị ego), mana nke a anaghị egosi na akpachapụghị anya. Omume na -enweghị isi na -etinye akara gị n'ihe egwu.
Ihe ngosi a anaghị emetụta mgbazinye ego n'ọdịnihu. Ndị insurers, ndị na -ewe mmadụ n'ọrụ na ndị nwe ụlọ na -enyocha ya. Mgbe ụbọchị iri atọ mbụ nke igbu oge, onye na -akwụ kaadị ga -ekwupụta mmebi iwu gị. Ndụmọdụ ndị a ga -enyere gị aka izere ịkwụ ụgwọ.
1. Nhọrọ Autopay
Ịkwụ ụgwọ akpaaka bụ ụzọ kachasị mfe iji gbochie mmejọ dị otú ahụ. Usoro nhazi a na -ewe nkeji 1, ọ na -ekwekwa udo nke uche. Hazie ịkwụ ụgwọ gị dị ka ihe ndị achọrọ si dị, hapụkwa ka sistemụ ahụ mee ihe ndị ọzọ. Ihe niile ị ga - eme bụ ijide n'aka na itule zuru oke maka ịkwụ ụgwọ ga -aga.
2. Nchetara Ịkwụ Ụgwọ
Ọ bụghị onye ọ bụla nwere ntụsara ahụ maka ebubo akpaka. Kama, ị nwere ike imepụta ihe ncheta kalịnda ma ọ bụ tọọ ọkwa. Nke a nwere ike ịgụnye ederede na ozi ịntanetị. Usoro nwere ike ịgwa gị mgbe enwetara nkwupụta gị, mgbe otu ụbọchị fọdụrụ tupu ụbọchị ruru, mgbe ụgwọ ịkwụ ụgwọ, wdg. Nke a dabere na nzukọ ịgbazinye ego.
3. Họrọ Ụbọchị Ọhụrụ
Ọ na -esiri ike ịdebe ọtụtụ ịkwụ ụgwọ ma ọ bụrụ na agbasaa n'ime ọnwa. Iji jikwaa ịkwụ ụgwọ nke ọma, ị nwere ike ịhazigharị ụbọchị ruru. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na ụgwọ gị ga -eru mgbe ịkwụchara ụgwọ, ọ ga -adịrị gị mfe ime ihe ndị dịịrị gị ma debe mmefu.
Ịkwụ ụgwọ n'oge gara aga bụ nkwubi okwu kacha emebi ihe na akụkọ gị n'agbanyeghị ụlọ ọrụ ọ bụla. Ha na -emetụta akara ahụ ruo afọ 7, ọ nweghịkwa ụzọ isi kpochapụ ozi a na -enyo enyo. Ndị na -eri ihe kwesịrị ịkpachara anya na ịkwụ ụgwọ ha, n'ihi na otu mmejọ ga -agbadata akara ahụ.
Tọọ ihe ncheta ma ọ bụ kwụọ ụgwọ ịkwụ ụgwọ iji zere ụdị mmejọ ahụ. Ọ bụrụ na akara gị adịghị mma, kpochapụ njehie mkpesa site na nrụzi. Ị nwere ike mepee esemokwu ahụ n'onwe gị ma ọ bụ nweta enyemaka nke ụlọ ọrụ tụkwasịrị obi.